प्रदेश नं. २ मा पहिलो पार्टी बन्छौंः राजपा महासचिव सुमन – Nepal Journal
प्रदेश नं. २ मा पहिलो पार्टी बन्छौंः राजपा महासचिव सुमन
Posted By: Nepal Journal September 10, 2017 | २५ भाद्र २०७४, आईतवार १८:१६
राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रदेश नम्बर दुई हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा बहुमत सिट जित्ने दाबी गरेको छ । सो पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले नेपाल जर्नलसंग कुरा गर्दै मधेशमा राजपा पहिलो पार्टी बन्ने जिकिर गरे । सप्तरीको कृष्णा सबरन गाउँपालिकामा चुनाव प्रचार अभियानमा रहेको सुमनसंग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः–
चुनावी प्रचार प्रसार कहाँ पुग्यो ? अहिले कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म यति बेला सप्तरीको कृष्णा सवरन गाउँपालिकामा निर्वाचन प्रचार प्रसारमा छु । जनताहरु राजपाको पक्षमा एक भएर लागेका छन् । राजपाका सबै शीर्ष नेता सप्तरीदेखि पर्सासम्मको चुनावी प्रचार प्रसार एवं घर दैलो कार्यक्रम, कोण सभा, आम सभामा व्यस्त हुनुहुन्छ । म पनि घर दैलो अभियानमा सक्रिय छु । सामाजिक सञ्जाल लगायत बिभिन्न माध्यामबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार जोडदार रुपमा चलेको छ । हामी प्रदेश नम्बर दुईमा जित्छौँ ।
ठुला दलहरु एक अर्कामा सहकार्य गरेर निर्वाचन लड्दैछन् । यस्तो अवस्थामा कति स्थानीय तहमा तपाईंहरुको जित हाँसिल हुन्छ ?
अरु दल के के गर्दैछन् भन्ने कुरा मधेशका लागि महत्वपूर्ण छैन । किनभने यिनिहरु मधेशका लागि राजनीति गर्दै छैनन् । मधेशी जनताको उत्थान, हक अधिकारका लागि उनीहरुको केही गरेका छैनन् मधेशमा हाम्रो नै हक लाग्छ र जनलहर हाम्रो पक्षमा छ हामी जित्छौँ भन्ने हो । ठ्याक्कै यति सिट ल्याएर विजयी हुन्छौँ भन्ने अड्कल तपाँईलाई गर्न सक्दिन तर सप्तरीदेखि पर्सासम्म जनतामा देखिएको जनलहरले हामीलाई विजयी बनाउने छ ।
हाम्रो रगत पसिना र जवानी मधेश उत्थानका लागि बितेका छन् र यो कुरा जनाताले राम्ररी बुझेका छन । जहाँसम्म पार्टी छोडेर जाने नेताको कुरा छ । उहाँहरुले मेयर पदमा नै सबै केरा देखेर लामो राजनीतिक यात्रालाई न्याय गर्नसक्नु भएन । उहाँहरु धेरै ठुलो मान्छे बन्नु पर्ने थियो तर सानैमा रमाएर छुट्टिनु भयो । उहाँहरुप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन । बरु कुनै पद नलिई बाहिरिनु भयो, उहाँहरुलाई धन्यवाद ।
काँग्रेस र कम्युनिष्टहरु समेत तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमिएको स्थितिमा तपाईहरु मधेश आन्दोलनका सहयात्रीबीच चाहीँ किन तिक्तता ?
मधेश आन्दोलनका एक जुट हौँ भनेर हामीले सबै खाले प्रयास गरेका थियौँ । एकता हुनसक्ने जति मिलेर राजपा बनेर अगाडि बढेका हौं । उपेन्द्र यादव र बिजय कुमारजीहरु मधेशको मुद्धा बोक्नु हुन्छ भने संगै अगाडि बढौँ भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो । तर उहाँहरु मधेशको पार्टी रहनु भएन । मधेशको मुद्धा उहाँहरुको आफ्नैं मुद्धा भएन । त्यसकारण गैह्रमधेसी भावना भएकाहरुसंग तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने वातावरण भएन । हामी एक्लै लडेका हाैं मधेशका लागि, अब पनि लड्ने छौँ र जित्ने छौँ ।
Be the first to comment on "प्रदेश नं. २ मा पहिलो पार्टी बन्छौंः राजपा महासचिव सुमन"